I-China Sprockets nezingxenye zabakhiqizi kanye nabenzi be-dozer kanye ne-crane nabaphakeli | Jinjia
Ama-Sprockets namaSegment abembayo ne-dozer ne-crane
Khetha uhla olubanzi lwe-sprocket ne-sprocket hub kusuka ku-0.2 kuye ku-120 ton crawler heavy excavator, scraping imishini neminye imishini ekhethekile.
I-sprocket yokusakaza, i-bolt kanye ne-nut yokuqinisa uhlobo lokuxhuma i-sprocket nohlobo lwe-welding sprocket ingaqiniseka ukuthi inhlangano ephelele futhi futhi ingaqeda ubungozi bokubopha abukwazi ukulungisa imbobo noma ukukhululeka.
Ukujula okuphumelelayo kokucishwa kuqinisekisa ukugqokwa okuhle kakhulu nokuphila isikhathi eside.
Ukungeniswa okujulile kuqine futhi iphethini yokujula eqine kakhulu kuphrofayili yonke yamazinyo inikeza impilo yokugqoka ende. Kungaba kusuka ensimbi yensimbi noma ekwakheni okushisayo, ama-MZ sprockets aqinisekisa ukumelana okuphezulu nokuqina ngisho nasezinsizeni ezinzima kakhulu. Imishini enembile yamahabhu nama-flanges inikeza ukushintshana okuphelele.
Zenziwe zaba lukhuni zokuqina kokuqina kokugqoka. Ubuso obuphezulu, ukujula nobulukhuni obuyisisekelo kusho ukuthi izingxenye ze-MZ zinikela ngempilo yokugqoka ende, ukumelana nokugoba, ukwephuka kanye nokugcinwa okuphezulu kwehadiwe. Umklamo we-bolt unciphisa isikhathi sakho sokuphumula somshini.
1. Sakaza insimbi noma insimbi eshisayo ekhiqiziwe yokugeleza okusanhlamvu okuphelele kwangaphakathi
2. Ukujula okuqinile okuqinile okungu-4-8mm kwe-HRC45
3. Omnene ukumelana nokuqhekeka nokuqhekeka
4. Umklamo owenzelwe ukunciphisa izindawo zokuhlushwa kwengcindezi
5. Ukuzingela ukwakhiwa kwamazinyo kunweba impilo yokugqoka
6. Ukwenza imishini ngokunembile kwezindawo ezikhuphukayo kuqinisekisa ukusebenza kahle kakhulu
I-1.Hot yakhelwe ukugeleza okusanhlamvu okuphelele kwangaphakathi
2.Ngokwenza lukhuni ukuqina kobuso obuphezulu (HRC> 50) nomgogodla onzima (HRC 45)
Idizayini eqondile kanye nemishini enembile yezindawo ezikhuphukayo ziqinisekisa ukusebenza okuhle kakhulu
Langaphambilini Komatsu track link assy nomkhiqizi eChina
Olandelayo: I-Caterpillar Crawler Excavator ngaphansi kwesithuthi IDLER
Ama-Bulldozer Sprocket Rims
I-Ductile iron cast yethrekhi yama-roller roller cover